အဆိုတော် ရေမွန်ရဲ့တစ်ဦးတည်းသောညီမလေးရဲ့ ရင်နဲ့မဆံ့အောင်ရေးထားတဲ့ ရေမွန်ရဲ့အကြောင်း – Cele Top Stars
အဆိုတော် ရေမွန်ရဲ့တစ်ဦးတည်းသောညီမလေးရဲ့ ရင်နဲ့မဆံ့အောင်ရေးထားတဲ့ ရေမွန်ရဲ့အကြောင်း
ချစ်လှစွာသောပရိတ်သတ်ကြီးရေ ဘပီဟာ…. မိသားစုထဲမှာ သားအကြီးမောင်နမ ၂ယောက်လုံးက မွေးလာကတည်းက အတောင်တဖက်စီ ပဲ့လာသူအချင်းချင်းမို့ ကိုယ့်ခံစားချက်သူနားလည်သလို သူ့ခံစားချက်တိုင်းလဲနားလည်ပေးတယ် ငယ်ငယ်ကဆို အမေသီချင်းထွက်ဆိုတိုင်း မထိန်းတတ်ထိန်းတတ်နဲ့ နို့ဘူးတွေဖျော် အနှီးတွေလဲနဲ့ ထိန်းလာပေးတဲ့ အကို မိစုံဖစုံ နဲ့ကြီးပျင်းလာတာ မဟုတ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်မှာ အားကိုးစရာဆိုလို့ သူပဲရှိခဲ့တယ်အဖေလို အကိုလိုမျိူး ချစ်ရတဲ့သူ သံယောဇဉ်အရှိဆုံးသူပွဲလမ်းတွေ သွားချင်တဲ့အခါတိုင်း အမေ့ကိုခွင့်တောင်းပေးပီးအမြဲလိုက်ပို့ပေးတယ်အပြန်ကျရင်မေးတယ် “ ပျော်လား ပြူးစိန် “ တဲ့ငါ့ညမက အမြဲစိတ်ဓာတ်ကျတတ်လို့နင်ပျော်ဖို့အရေးကြီးတယ် ငါအားရင်လိုက်ပို့မယ်ဆိုပြီးပြောနေကျ
အမေနဲ့ရန်ဖြစ်တိုင်းလဲ ကားနဲ့လာလာခေါ်ထုတ်ပေးပီး စိတ်ပျော်အောင်ထားတယ် ဘာစားမလဲ ဘာလုပ်မလဲအကုန်နားလည်ပေးပီး နှစ်သိမ့်တတ်ဆုံးသူမို့ အခုချိန် ပိုခံစားရတယ် Covid အချိန်ကတည်းက အိမ်ကစီးပွားရေအဆင်မပြေလို့ သူပဲထောက်ပံ့ခဲ့တာ အိမ်လခ ဈေးဖိုးက အစသူ့ဘက်က ဘယ်လောက်အဆင်ပြေပြေ မပြေပြေကိုယ်တွေကို ထုတ်မပြောဘူးမရရအောင် ရှာဖွေပြီးလာပေးတတ်တဲ့သူ… Streamer လုပ်တုန်းကလဲ သူအရမ်းကြိုးစားတယ်နဂိုထဲက ဂိမ်းဆော့ရ ဝါသနာပါတဲ့သူမို့ သူနဲ့အဆင်ပြေတာပေါ့တခါတလေတော့လဲ အရမ်းညည်းတယ်ပင်ပန်းလိုက်တာတဲ့… ပျင်းလို့ဆော့တာမျိုးမဟုတ်ပဲ အလုပ်တခု အနေနဲ့လုပ်ရတော့ညလဲမအိပ်ဖြစ် မျက်ရိုးတွေကိုက်နဲ့ အရမ်းပင်ပန်းရှာတယ်သနားလွန်းလို့ ဘပီရယ် အဲ့လောက်ကြီး အလုပ်တွေဖိမလုပ်ပါနဲ့နားပါဦးဆိုလဲ “ အ လုပ်လုပ်မှ ပိုက်ဆံရမှာ ကြိုးစားရမယ် “ တဲ့အသက် 40 ပြည့်ရင် ဘုန်းကြီးဝတ်မယ်ဆိုပဲငါဘုန်းကြီးဝတ်သွားရင် ငါရှာထားသမျှအကုန်လုံးက နင်တို့အတွက်ပဲ ဆိုပီးပြောနေကြလူကြီးသူ့အနွံတာ သူအနိုင်ကျင့်သမျှ အခံဆုံးကလဲ ကိုယ်ပဲရန်ဖြစ်တိုင်းလဲ သူအဆဲဆုံးပဲ သူပြောနေကျစကား “ ငါကအကြီး ငါ့ကိုဆရာ လာမလုပ်နဲ့ ” x) အမြဲတမ်း ရန်ဖြစ်ပြီးတိုင်း ပန်းစည်းကြီးယူလာပီးပါးကိုလာနမ်းတယ် စိတ်မဆိုးနဲ့တော့ ပြူးစိန် ဆိုပီးအပြင်ထွက်ခါနီးတိုင်းလဲ အမေနဲ့ညမကို နမ်းပီးမှသွားတတ်တဲ့သူမျိုးတနေ့ကို ဖုန်းတခေါက်ပုံမှန်မပြောဖြစ်ဘူးအမြဲ ချစ်တယ် ဆိုပြီး တဖွဖွမပြောဘူး ဒါပေမယ့် သူအရမ်းချစ်တယ် ဆိုတာသိတယ်
ဘပီရေ…. ဘပီကြိုက်တဲ့ဟင်းလေးတွေ မီးမီးချက်ကျွေးချင်သေးတယ် ဘပီ အဝတ်တွေလဲ လျော်ပေးချင်သေးတယ် ဘပီ စိတ်ဆိုးလို့ အော်ဆဲတဲ့ အသံလေးလဲ ကြားချင်သေးတယ် ဘပီ နေမကောင်းတဲ့အခါတိုင်း ပြုစုပေးချင်သေးတယ် ဒီခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ ကာလကြီး ပြီးသွားရင် မိသားစုကို ဗုဒ္ဓဂါယာဘုရားဖူး လိုက်ပို့မယ်ဆို ? အခုဖြစ်နေတာတွေအားလုံးက တကယ်မဟုတ်ရင် သိပ်ကောင်းမယ်ဘပီချစ်တဲ့ ပြူးစိန်က ဘပီလောက် မသန်မာဘူး မရင့်ကျက်သေးဘူး ဘပီရေ ဘပီမရှိတဲ့နောက် ဘယ်လိုနည်းနဲ့ အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာလဲ မတွေးတတ်တော့ဘူးေ နရာချင်းလဲပေးလို့ ရရင်သိပ်ကောင်းမယ် ဒီအချိန်မှာ အရာအားလုံးက ကိုယ့်တာဝန်ကျလာပီဆိုတော့ အမေ့အတွက် ပိုပိုးလေးအတွက် ကြိုးစားပြီးတော့အသက်ဆက်ရှင်ရဦးမယ် ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုခွန်အားမျိုးနဲ့ ဆက်ရပ်တည်ရမလဲဆိုတာ မသိဘူး ( ဘပီသိပ်ကြိုက်တဲ့ အုန်းထမင်းနဲ့ကြက်သား ) အခုချိန်ဆို ဘပီဘယ်ရောက်နေမလဲ ???? မီးမိးတို့ ငိုနေတာတွေ့ရင် ဘပီကော ဝမ်းနည်းနေမလား ??? အတွေးပေါင်းစုံ ဝင်ပြီး ရူးတော့မယ်ဘပီရယ် အပြင်မှာရာသီဥတု သိပ်အေးတယ် ရင်ထဲမှာတော့ အတော်ပူလောင်နေတယ်ေ မကြီးအတွက်တော့ စိတ်ချနော် မီးမီးရှိတယ် သီချင်းလေးအတိုင်းပဲ စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်သာ ချန်ခဲ့ ပါ သိပ်ချစ်တယ် ငါ့အက်ို ..ဟုရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဖတ်ရှူ့ပေးကြတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်..။
ခဈြလှစှာသောပရိတျသတျကွီးရေ ဘပီဟာ…. မိသားစုထဲမှာ သားအကွီးမောငျနမ ၂ယောကျလုံးက မှေးလာကတညျးက အတောငျတဖကျစီ ပဲ့လာသူအခငျြးခငျြးမို့ ကိုယျ့ခံစားခကျြသူနားလညျသလို သူ့ခံစားခကျြတိုငျးလဲနားလညျပေးတယျ ငယျငယျကဆို အမသေီခငျြးထှကျဆိုတိုငျး မထိနျးတတျထိနျးတတျနဲ့ နို့ဘူးတှဖြေျော အနှီးတှလေဲနဲ့ ထိနျးလာပေးတဲ့ အကို မိစုံဖစုံ နဲ့ကွီးပငျြးလာတာ မဟုတျတဲ့အတှကျကိုယျ့မှာ အားကိုးစရာဆိုလို့ သူပဲရှိခဲ့တယျအဖလေို အကိုလိုမြိူး ခဈြရတဲ့သူ သံယောဇဉျအရှိဆုံးသူပှဲလမျးတှေ သှားခငျြတဲ့အခါတိုငျး အမကေို့ခှငျ့တောငျးပေးပီးအမွဲလိုကျပို့ပေးတယျအပွနျကရြငျမေးတယျ “ ပြျောလား ပွူးစိနျ “ တဲ့ငါ့ညမက အမွဲစိတျဓာတျကတြတျလို့နငျပြျောဖို့အရေးကွီးတယျ ငါအားရငျလိုကျပို့မယျဆိုပွီးပွောနကြေ
အမနေဲ့ရနျဖွဈတိုငျးလဲ ကားနဲ့လာလာချေါထုတျပေးပီး စိတျပြျောအောငျထားတယျ ဘာစားမလဲ ဘာလုပျမလဲအကုနျနားလညျပေးပီး နှဈသိမျ့တတျဆုံးသူမို့ အခုခြိနျ ပိုခံစားရတယျ Covid အခြိနျကတညျးက အိမျကစီးပှားရအေဆငျမပွလေို့ သူပဲထောကျပံ့ခဲ့တာ အိမျလခ စြေးဖိုးက အစသူ့ဘကျက ဘယျလောကျအဆငျပွပွေေ မပွပွေကေိုယျတှကေို ထုတျမပွောဘူးမရရအောငျ ရှာဖှပွေီးလာပေးတတျတဲ့သူ… Streamer လုပျတုနျးကလဲ သူအရမျးကွိုးစားတယျနဂိုထဲက ဂိမျးဆော့ရ ဝါသနာပါတဲ့သူမို့ သူနဲ့အဆငျပွတောပေါ့တခါတလတေော့လဲ အရမျးညညျးတယျပငျပနျးလိုကျတာတဲ့… ပငျြးလို့ဆော့တာမြိုးမဟုတျပဲ အလုပျတခု အနနေဲ့လုပျရတော့ညလဲမအိပျဖွဈ မကျြရိုးတှကေိုကျနဲ့ အရမျးပငျပနျးရှာတယျသနားလှနျးလို့ ဘပီရယျ အဲ့လောကျကွီး အလုပျတှဖေိမလုပျပါနဲ့နားပါဦးဆိုလဲ “ အ လုပျလုပျမှ ပိုကျဆံရမှာ ကွိုးစားရမယျ “ တဲ့အသကျ 40 ပွညျ့ရငျ ဘုနျးကွီးဝတျမယျဆိုပဲငါဘုနျးကွီးဝတျသှားရငျ ငါရှာထားသမြှအကုနျလုံးက နငျတို့အတှကျပဲ ဆိုပီးပွောနကွေလူကွီးသူ့အနှံတာ သူအနိုငျကငျြ့သမြှ အခံဆုံးကလဲ ကိုယျပဲရနျဖွဈတိုငျးလဲ သူအဆဲဆုံးပဲ သူပွောနကေစြကား “ ငါကအကွီး ငါ့ကိုဆရာ လာမလုပျနဲ့ ” x) အမွဲတမျး ရနျဖွဈပွီးတိုငျး ပနျးစညျးကွီးယူလာပီးပါးကိုလာနမျးတယျ စိတျမဆိုးနဲ့တော့ ပွူးစိနျ ဆိုပီးအပွငျထှကျခါနီးတိုငျးလဲ အမနေဲ့ညမကို နမျးပီးမှသှားတတျတဲ့သူမြိုးတနကေို့ ဖုနျးတခေါကျပုံမှနျမပွောဖွဈဘူးအမွဲ ခဈြတယျ ဆိုပွီး တဖှဖှမပွောဘူး ဒါပမေယျ့ သူအရမျးခဈြတယျ ဆိုတာသိတယျ
ဘပီရေ…. ဘပီကွိုကျတဲ့ဟငျးလေးတှေ မီးမီးခကျြကြှေးခငျြသေးတယျ ဘပီ အဝတျတှလေဲ လြျောပေးခငျြသေးတယျ ဘပီ စိတျဆိုးလို့ အျောဆဲတဲ့ အသံလေးလဲ ကွားခငျြသေးတယျ ဘပီ နမေကောငျးတဲ့အခါတိုငျး ပွုစုပေးခငျြသေးတယျ ဒီခကျခဲကွမျးတမျးတဲ့ ကာလကွီး ပွီးသှားရငျ မိသားစုကို ဗုဒ်ဓဂါယာဘုရားဖူး လိုကျပို့မယျဆို ? အခုဖွဈနတောတှအေားလုံးက တကယျမဟုတျရငျ သိပျကောငျးမယျဘပီခဈြတဲ့ ပွူးစိနျက ဘပီလောကျ မသနျမာဘူး မရငျ့ကကျြသေးဘူး ဘပီရေ ဘပီမရှိတဲ့နောကျ ဘယျလိုနညျးနဲ့ အသကျရှငျရမလဲဆိုတာလဲ မတှေးတတျတော့ဘူးေ နရာခငျြးလဲပေးလို့ ရရငျသိပျကောငျးမယျ ဒီအခြိနျမှာ အရာအားလုံးက ကိုယျ့တာဝနျကလြာပီဆိုတော့ အမအေ့တှကျ ပိုပိုးလေးအတှကျ ကွိုးစားပွီးတော့အသကျဆကျရှငျရဦးမယျ ဒါပမေယျ့ ဘယျလိုခှနျအားမြိုးနဲ့ ဆကျရပျတညျရမလဲဆိုတာ မသိဘူး ( ဘပီသိပျကွိုကျတဲ့ အုနျးထမငျးနဲ့ကွကျသား ) အခုခြိနျဆို ဘပီဘယျရောကျနမေလဲ ???? မီးမိးတို့ ငိုနတောတှရေ့ငျ ဘပီကော ဝမျးနညျးနမေလား ??? အတှေးပေါငျးစုံ ဝငျပွီး ရူးတော့မယျဘပီရယျ အပွငျမှာရာသီဥတု သိပျအေးတယျ ရငျထဲမှာတော့ အတျောပူလောငျနတေယျေ မကွီးအတှကျတော့ စိတျခနြျော မီးမီးရှိတယျ သီခငျြးလေးအတိုငျးပဲ စိတျဖွောငျ့ဖွောငျ့သာ ခနျြခဲ့ ပါ သိပျခဈြတယျ ငါ့အကျို ..ဟုရေးသားထားတာပဲဖွဈပါတယျ။
ဖတျရှူ့ပေးကွတဲ့ပရိတျသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျပါစလေို့ ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော..။
ခံဝင်လေးထိုးပြီးအိမ်မှာ အေးဆေးပြန်နေဖို့သူမကို ပြောလာတဲ့သူကို ပညာရှိနည်းနဲ့ ပြန်လည်တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
အစ်မကြီးအမိရာဆိုသလို ချစ်ညီမလေးဘ၀ကောင်းစားစေဖို့အတွက် ဆုံးမသွန်သင်ပေးနေတဲ့ ဘီလီလမင်းအေး
ကျက်သရေအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံလွန်းကာ မြန်မာဝတ်စုံနဲ့နန်းဆန်ဆန်လှပနေတဲ့ ဖုန်းသီရိကျော်
သူမရဲ့ဒူဘိုင်းကအပန်းဖြေပုံရိပ်တွေကို သတိရနေတဲ့ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ချပြလာတဲ့ နေခြည်ဦး
Golden Heart Animals Rescue မှာရှိတဲ့လေလွင့်တိလေးတွေအတွက် မွေးနေ့အလှူအဖြစ်အဟာရဒါနလှူခဲ့တဲ့ No အဖွဲ့ဝင် ရတနာ
တစ်သားမွေးတစ်သွေးလှဆိုသလို မမွေးခင်ကတည်းကပိုပိုလှလာတဲ့ သူမပုံရိပ်လေးတွေကိုချပြလာတဲ့ ဘေဘီမောင်